दया, सौगात र मिरुना स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले एक सातामै कमायो १५ करोड! - Mitho Khabar
June 3, 2022 mithokhabarLeaveaComment on दया, सौगात र मिरुना स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले एक सातामै कमायो १५ करोड!
अभिनेता दयाहाङ राई, मिरुना मगर र सौगात मल्ल स्टारर् ‘कबड्डी–४ः द फाइनल म्याच’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाइ गरिरहेको छ । फिल्मका वितरकका अनुसार ‘कबड्डी–४’ले एक सातामा नै १५ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल भएको छ । योसँगै एक सातामा सर्वाधिक कलेक्शन गर्ने फिल्मको समेत रेकर्ड बनाएको छ ।